Chii chinonzi chimiro chemutengi? | ECommerce nhau
Chii chinoshandiswa nemutengi?
Mufambiro wevatengi Iyo inomiririra yakakosha chinhu kana iyo kambani inoda ruzivo nezve mafambiro uye mashandiro maitiro, pamwe nekushanda kwesangano.
Kana bhizinesi rako riri mumakwikwi ebhizinesi, wana vatengi profiles Mune dhatabhesi yako inogona kukupa iwe ruzivo nezvekuti ndevapi vatengi vanobatsira kwazvo zvichibva pamuganhu wakakura wechigadzirwa uye mutengo webasa revatengi.
Saizvozvo, izvi profiles yevatengi Ivo vanozokutendera iwe kuti uzive kuti ivo vamwe chete vatengi varipo parizvino, vaive zvakare vaive vanobatsira kwazvo mumwedzi wapfuura kana gore rapfuura. Kwete izvozvo chete, chimiro chevatengi chinogona kukuudza izvo zvigadzirwa zviri kutengesa zvirinani uye ndeapi ari kugadzira zvakaderera kutengesa.
Iwe unogona zvakare kuziva kuti ndezvipi zvigadzirwa zvinoda kudzoreredzwa uye ndezvipi zvigadzirwa zvitsva zvinogona kutorwa kugutsa zvido zvemusika pakati pe a mamwe makore ezera. Kubatwa uye kushandiswa kwemaprofiles evatengi aripowo mumabasa ewebhu, kunyanya mukutengeserana kwemagetsi.
Muchokwadi, akawanda mapeji uye iwe unayo online, ivo vanogadzira yakazvimirira dhatabhesi yeiyo yega basa. Iko kushandiswa kwevatengi profiles eEcommerce saiti Iyo inogona kuve yakaoma kuita, kunyanya nekuti vanhu havana kuganhurirwa kune imwechete webhusaiti. Naizvozvo, zvitoro zvepamhepo zvinofanirwa kuona kuti vanokurudzira chigadzirwa chakakodzera kune vateereri chaivo.
Izvo zvakakoshawo kufunga izvozvo nhoroondo dzevatengi Ivo vari kuramba vachichinja, uye panogona kuve nezvakawanda zvikonzero nei zvinhu izvi zvichidonha kubva mudhata. Zvinogona kuti mutengi ari kure nenzvimbo kana kuti zvavanofarira zvangochinja.
Mazhinji matura edhata eecommerce saiti, Iine injini dzinoongorora zviitiko zvehunhu panzvimbo ino. Aya majini anokwanisa kuteedzera zvakatengwa, kunyoreswa, wongororo yezvigadzirwa, uye zvese zvimwe zvinogona kuwana ruzivo. Nekudaro, ma profiles evatengi anogona kugara achigadziriswa.
Ndivanaani chaizvo vangave vatengi vedu?
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Chii chinoshandiswa nemutengi?
Zvinhu zvaunofanira kutarisa kuti Ecommerce yako ibudirire
DHL inoshandisa FarEye kugadzirisa bhizinesi rayo rekushandisa